कांग्रेस नसुध्रिने र कार्यकर्ता रमिते भइरहने कहिलेसम्म ?
घिमिरे कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।
‘आग्रहले भरिएको दिमाग भन्दा खाली दिमाग सत्यको नजिक हुन्छ’, यो भनाइ हो अमेरिकाको संस्थापक मध्येका एक थोमस जेफर्सनको । उनी अमेरिकाको तेस्रो राष्ट्रपति पनि हुन् ।
उनको यो उद्गार उत्तिकै कालजयी पनि छ । मष्तिस्कमा आग्रहले अड्डा जमाएपछि मानिसले आफ्नो पूर्ण क्षमताले कार्य गर्दैन । उसले कुन काम गर्नुपर्ने हो, कुन चाहिँ नपर्ने हो भनेर वर्गीकरण गर्न शुरू गर्छ । समस्या यहीँबाट शुरू हुन्छ र बेथिति निम्त्याउँछ । उसले सम्हालेको समाज वा संस्थाले आफ्नो मौलिक चरित्र गुमाउन पुग्छ र घोषित लक्ष्यहरू अलमलिन्छन् । त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम भद्दा र कुरूप हुन्छ । त्यसको स्वाद चटपटे त होला तर स्वास्थ्यवर्द्धक हुँदैन ।
यो प्रसंग किन उठाइएको हो भने कांग्रेस महाधिवेशन सकिएको ठ्याक्कै ६ महिना पूरा भयो । कम्तीमा यो समयलाई नयाँ कार्यसमितिको प्रारम्भिक मूल्यांकनको समय मान्नुपर्छ । यस अवधिभित्र केन्द्रीय समितिमा केही व्यक्तिहरूको मनोनयन, कार्यसम्पादन समितिमा केही सदस्य थप र संसदीय समितिमा एक जना थप्ने बाहेक महत्त्वपूर्ण कार्य अधूरै रह्यो । ६ महिनाभित्र पदाधिकारी चयन, केन्द्रीय समिति, विभाग र अन्य समितिहरुलाई पूर्णता दिएर पार्टीलाई सांगठनिक व्यवस्थापनले सुदृढ बनाउनुपर्ने अभिभारा उपर यस्तो उदासिनता किन ? आज सर्वत्र प्रश्न उठ्ने ठाउँ पार्टी नेतृत्वले किन दियो ? पार्टीका जानकार नेताहरूले नेतृत्वलाई किन यो विषय सम्झाएनन् या झक्झक्याएनन् ?
पार्टीभित्रको विगतको बेथिति र पद्धतिविहीनता रोक्न केन्द्रीय समितिको निर्णायक जिम्मेवारीमा पुगेका नेताहरू समेत किन रमिते भए ? १४औं महाधिवेशन पश्चात् पार्टीलाई व्यवस्थितरूपमा चलाउने उद्घोष गरेका दुवै पक्षको कमबेसी उपस्थिति रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिले यी विषयमा ध्यान किन दिइरहेको छैन ? सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
यो विषयमा नेतृत्व तहका नेताहरू सबैको मौनताबाट आश्चर्यचकित भएर पनि जिम्मेवारी पालनाको मुद्दा उठाइएको हो किनभने समुन्नत लोकतन्त्रमा कर्तव्य र आश्चर्य दुवैको आ-आफ्नो विशेष ठाउँ हुन्छ । आश्चर्य मानेर पनि बोल्न पाइन्छ र कर्तव्य सम्झेर पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ ।
यो विषयले पार्टी नेतृत्वलाई टाउको दुखाउन सक्छ या चिढ्याउन पनि सक्ला, तथापि पनि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतमा मात्र भए पनि यो विषय उठाउनैपर्ने पेचिलो प्रश्नको रूपमा इतिहासका सामु खडा छ । आँखै अगाडि बिग्रिएको र भत्किएको बिषयलाई नजरअन्दाज गर्नु, मौनता साँध्नु र मुकदर्शक हुनु ठूलो गैरजिम्मेवारी हो । त्यसैले, पार्टी नेतृत्वले समयमै पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको विषय आम सदस्यको चासो र सरोकारको विषय भएकाले एउटा सामान्य तर जिम्मेवार सदस्यका नाताले समेत नउठाई बस्दा इतिहासको कठघरामा अपराधीकोरूपमा खडा हुनुपर्ने कटुसत्यलाई दृष्टिगत र मनन समेत गरी छलफलको प्रयास गरिएको मात्र हो ।
पङ्तिकारले बेलाबेलामा भन्दै आएको कुरा के हो भने, लोकतन्त्रवादी भइटोपल्न धेरै सजिलो कुरा छ तर यसका आदर्श र चरित्रहरुलाई परिपालना गर्न असाध्यै गाह्रो छ । लोकतन्त्र फगत गायत्री मन्त्र होइन, जसलाई जपिदिए मात्रै पुग्छ । अनि यो त्यस्तो पौराणिक शास्त्र पनि होइन, जसलाई भट्याइदिए पुग्छ । कर्म र व्यवहारले सिद्ध नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको गीत गाउनु या जामा लगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । हामी कुन बाटोमा छौं, कर्मले सिद्ध गर्ने या गीत मात्र गाउने ? इतिहासका सामु गम्भीर प्रश्न छ । कसले सम्झाइदिने वा कति सम्झाउने वा किन सम्झाउने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै छ । तथापि, भोलिको पुस्ताले इतिहास खोतल्दा कम्तीमा कसै न कसैले त भनेको रहेछ भन्ने कुरा अभिलिखित होस् भन्ने अभिप्रायकासाथ यो चर्चा गरिएको हो ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरुको जीवनपद्धति संस्थागत, लोकसम्मत र पारदर्शी हुनुपर्दछ । हाम्रो नेपाली लोकतन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको नेपाली संस्करणले यो मन्त्रलाई आजसम्म आत्मसात् गर्नै सकेन । हामी प्रणाली अवलम्बन गरिदिए पुग्ने, थप केही गर्नु नपर्ने मानसिकतामा बस्यौं । यो भन्दा गैरजिम्मेवार शैली अर्को हुन सक्तैन । हाम्रो सकारात्मक चालचलन, व्यवहार र निष्ठापूर्ण अभ्यास कर्मले मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नैं चाहेनौं । लोकतन्त्र ल्याएपछि बासी दिमाग खाली गर्नु पर्थ्यो तर हामी पुरानै दिमागले काम गर्न थाल्यौं । त्यसैले, जेफर्सनले भनेजस्तो सत्यबाट धेरै टाढा दौडिरहेका छौं । किनभने दिमागमा आग्रह छ । आँखा अगाडिको सत्यलाई अनदेखा गर्नु लोकतन्त्र हुँदै होइन भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने र कसले बुझाउने ? पार्टीलाई वैधानिक रूपमा तन्दुरुस्त बनाउन केले रोक्यो र कसले रोक्यो ? यो विषय सामान्य होइन, कसैको घरेलु मामला पनि होइन, कांग्रेसका लगभग नौ लाख सदस्यहरुको साझा मामला हो । कांग्रेसका बारेमा सार्वजनिकरूपमा उठ्ने प्रश्नको सामना यही नौ लाखले गर्नु पर्दछ तर अन्तिम जवाफ चाहिँ नेतृत्वले दिने हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ पर्दैन ? कि आजसम्म जसोगरी पार्टी चलेको छ, त्यसैगरी नै चल्दा कसले के लछारपाटो लाउन सक्छ भन्ने मानसिकता हो ? यदि त्यसो हो भने यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
नीति महाधिवेशन नगर्ने ?
कोरोनाको वैश्विक महामारीको कारण समेत कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन समयसीमा भित्र सम्पन्न हुन सकेन । पार्टी विधान र मुलुकको संवैधानिक प्रवन्ध नाघेर भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुनुलाई जे भए पनि हुन त भयो भनेर सबैले स्वीकारे । यसले पार्टीको वैधानिकता गुम्न लाग्दालाग्दै सुरक्षित अवतरण पायो र एउटा ऐतिहासिक खड्गो टर्‍यो । पार्टीको आगामी कार्यकालको नेतृत्व चयन भयो । नेतृत्वमा को आयो, त्यो गौण कुरा थियो । लामो विमर्श र बिग्रह हुँदै निश्चित प्रक्रियाको माध्यमबाट नेतृत्वको टुंगो लागेपछि त्यस विषयको माथापच्ची सकियो । तर, महाधिवेशनले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम अधुरै अर्थात् बाँकी नै थियो,पार्टीको आगामी कार्यकालको नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा ।
महाधिवेशनलाई दुई खण्डमा विभक्त गरी एक खण्डमा नेतृत्व चयन गर्ने र अर्को खण्डमा नीति तर्जुमा गर्ने वैधानिक प्रवन्ध गरियो । पार्टीका नीम्ति नेतृत्व ‘हार्डवेयर’ हो भने नीति र कार्यक्रम ‘सफ्टवेयर’ । यी दुवैको समुचित बन्दोबस्त र संयोजनमा मात्र पार्टी चल्छ । त्यसैले, ६ महिनासम्म पनि नीति अधिवेशन गर्ने सुरसार किन नभएको हो, अब यसको विषयमा पनि प्रश्न किन नउठाउने ? कि नीति कार्यक्रम बेगर नै एकपल्ट चलाई हेरौं न भन्ने सोचाइ या सबैको सहमति हो ? एउटा अर्को यक्ष प्रश्न हामी उपर छ ।
भ्रातृ संगठन यस्तै राख्ने ?
कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थालाई त्यसका नयाँ सदस्यहरूले जीवन्त राख्ने हो । पुराना सदस्यहरू धेरै गतिविधि गर्दैनन् किनभने उनीहरुले आफू नयाँ हुँदा प्रशस्तै गतिविधि गरेका हुन्छन् । यो प्राकृतिक कुरा पनि हो । नयाँ सदस्य उर्जाशील हुन्छन् र उनीहरूले संस्थामा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्ने हुन्छ, योग्यता देखाउनु पर्ने र योगदान बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि भूमिका चाहिन्छ । भूमिकाको वितरण स्थापित प्रवन्ध र व्यवस्थापनले प्रदान गर्छ । यसको अग्रसरता नेतृत्वले लिन्छ र लिनु पर्दछ ।
कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनपछि संगठन सञ्चालनको परम्परागत कार्यशैलीमा के परिवर्तन भयो ? परिवर्तनका संकेत देखिनलाई बितेका चार महिना पर्याप्त छन् । स्पष्ट नै छ, पार्टी परम्परागत पदचिन्हमा हिँडेको छ, नयाँपनको कुनै आभास छैन । के यस्तो शैलीले लोकतन्त्रप्रति न्याय गर्ला ? जनता, राष्ट्र र इतिहासप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्ला ? पार्टीभित्र उत्साह थपेर वर्तमान प्रणालीको भविष्यप्रति नै उठेका प्रश्नहरूको समुचित जवाफ देला ? वर्षौंसम्म आफ्नो बहुमूल्य जीवन खर्चेका पार्टीका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूमा आशा जगाउला ? विस्तार यो बहसलाई सघन तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
पार्टीका एकदर्जन भन्दा बढी भ्रातृ संस्थाहरुको वर्षौंसम्म महाधिवेशन हुँदैन । तदर्थ, समिति गठनको श्रृंखला जारी छ । तदर्थ समितिले पूर्णता प्राप्त गर्दैन । विचित्रको कुरा त के छ भने स्वयं भ्रातृ संस्थामा बसेका वा बस्न चाहने नेता कार्यकर्ता चुँ सम्म बोल्दैनन् । यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ? यो सिलसिला कहिलेसम्म ? यसको अन्तर्यमा के छ ? कुन त्यस्तो अज्ञात शक्ति छ, जसले सत्य र विवेक बोल्न रोकेको छ ?
मौन बस्नेले बिग्रियो भन्न पाइन्छ र ?
राजनीतिक दल एउटा बृहत् परिवार हो । यसमा सबैको हक र स्वामित्व हुन्छ । यसलाई सुधार्न, अघि बढाउन थोर बहुत सबैको भूमिका रहन्छ । समाजका हरेक सदस्यको योगदानबाटै त्यसको प्रगति या अवन्नतिको आधारशिला तयार भएजस्तै राजनीतिक दलका हरेक सदस्यको भूमिकाद्वारा नै दलको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।
हामी अहिले कांग्रेसका विषयमा आश्चर्यजनक मौनता साधिरहेका छौं । यसको तात्पर्य बुझिनसक्नु छ । समयक्रममा बुझिएला । तर, मौनता साध्नेसँग दलमा चित्तबुझ्दो काम भएन वा दल बिग्रियो भन्ने अधिकार पनि रहँदैन । यतिसम्म कि बिग्रियो भनेर रुने अधिकार पनि रहँदैन । समय छँदै सबै पक्षमा सुधार र परिवर्तन ल्याएर अघि बढ्ने तर्फ अग्रसरता देखाउँ भन्ने आग्रह मात्र हो । एउटा विवेकशील तथा स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न पनि लोकतन्त्र नै चाहिन्छ भनेर मात्र हो ।
एमाले सांसदले भने- मन्त्रीहरूको मुख च्यात्नु नपरोस्